Puntland's Chairman of Parliament "We fear that Col. Caare will make it easy for Somaliland to take over East Sanaag - Page 3 - Politics - Somali Forum - Somalia Online
Dhaqanka Reer Waqooyiga ayaa wuxuu yahay ninka liita ee hacooga ah, mar hadal-duur xul ah (ama weedh xaad-ka-salaax ah) ayaa loogu iftiimiyaa halka uu ka liito. Marna gole ayaa lasoo fadhiisaya, oo inkasta oo ay runtu dacar ka qadhaadh tahay, hadana waa lagu cadeeyaa.
Gaar ahaan waxa lagu cadeeyaa isagoo oo dhex fadhiya gole aanu hadhowto ka odhan karin, waa layska key raacey oo "tol" ima garab taagneyn markii lay xiniinyo-siibey, xil-gudashadeydana nusqaan lagu sheegay.
Taas-na waxa aan ku keenay, si aan kuu tuso halka aad ka liitado, ayaan markii hore si "nasteexo" ahaan ah kuu "dul-marey", si dadban iyo si maldahanba, xaqiiqdu waxa at tahay, bal in aad in uun garasho kugu jirto, oo aad ogaado in aan naxli lagu tororog leeyaa hadal-rageed aheyn.
Laakiin, waxa ii muuqato in aad tahay nin ay la fogaatey cuqdada iyo ciilka aad ka qaatey xiniinyo-la'aanta ku heysata iyo bahdilista maanta lagugu hayo oo dhulkaagii Kenya iyo Ethiopian ay isku heystaan. Waana waxa aan kuu idhi nin baa ah ama noqda:
"......Garaad-yare Gufuur-Culus Gumeeyeen......".
Taas oo aan ula jeeday, "Gufuur-culus Africa iyo Ardul-Sawaaxil" kasoo hayaamay ayaa maanta ku gumeysta (ama ku gumeeyey).
Halka kalana waxaan kaa idhi kuwa aad cuqdada u qabto ee SNM ah (oo aad ula jeedo Beeshe-Dhexe) in ay yihiin rag tashadey oo waxaan ku mitaaley:
"......Geesiga Guusha Hantiyey......".
Taas oo aan ula jueeday, in guushii ay iyagu raadinayeen ay heleen oo dhulkoodii cid kale ama wax "faqash-ka-hadheen" ahi aanu ka talin maanta. Si kasta oo aad uga gubato guushaasba.
Mar hadaadse "duur-xulkii" ama weedhii "xaad-ka-salaaxa-ahaa" ee aan islahaa ku tus halka liitada ee uu dhex-jeego, aad fahmi weyday, ama aaney kuu dhacsaneyn, markaas waan ku soo "gole-fadhiisinayaaye" oo runta ayaan kuu cadeynayaaye si fiican ii maqal, Saaxiib.
Runtuna waxa weeye in nadalnimaddii iyo Ina-Gumeednimaddii aad ka qaatey gumeysiga cusub ee aad ku jrto, iyo guusha ay SNM gaadhay oo aad moodo in ay "cunaha-kuu-dhaafi-latahay", ay labadaas arrimood isugu kaa darsameen oo dabadeedna kaa dhigeen nin wareersan oo ku hadaaqaya SNM baa leh dhaqankii Yuhuuda iyo Fircoon.
Waana waxaan kuu idhi adigu isma-ogid ee runtii waan kuu khajilaa marka aan arko doodahaaga billaa-naxwaha ah ee kaa soo maaxeya, oo ah hadal-meel-waayey oo laga yaq-yaqsoodo ama laga diir-dido.
Gebo-gabadii, Saaxiib, gar-raggeedna garaadkaagu uma "aqli-culna", sida iiga kaa muuqata. Hadal-madhanna kama kor-kici kartid. Cuqdad iyo Ciil aad reer gaar ah u qabtana waa ku asqeysay. Xiniinyo iyo ragganimo aad ku "Cad-goosatana" oo aad ku "Sharaf-baxdana" waa kaa soo gudheen, amaba umaad dhalan.
Taasina waxa ay keentay in aad noqoto sawirkan "nuxur-madhanka" ah ee aad u egtahay marka aad soo hadaaqdo. Waxaaney u badan tahay in aan taas waxba laga qabib karin, ee ducadda oo aad badsato iyo masaajidka oo aad ku agdhawaato folowgeed yeel. Bal waa intaas oo ay "dabiib" kuu noqdaane.
Oo waxba beelaha SNM oo aad ku hunqaacdo haku "khaatumo-seegin". Sababta oo ah ragaasi taladoodi "qaamuus" qoran oo wadar ay isugu-dhaarsadeen ayey ugu qorantahay wixii taladoodu noqon laheyd. Mana weydiinayaan waxa ay tahay "taladaasi" mid xaalkiisu sida adiga oo kale ah yahay, oo ah nin ka "qaawan" oo ka "madhan", sharaf, gobonimo, garasho, karti, raganimo, iyo Xinniinyaba.
Awoowe garaadka qofku asagoon markiisii horaba fiicnayn hadii aqoon aan geli kari lagu shubo, waalli buu ka qaadaa.
Aduunka waxaan ugu jeclahay shakhsiyan inaan arko nin reer waqooyi ah oo wadani ah oo u taliya soomaaliyoo dhan si farqiga iyo cuqdaduba nooga baxdo dal iyo dad isku mid ahna la helo,waadna soo aragtay qiimaha ay lahayd berigaad jaamacadii lafoole u kalihi jirtay.
Soo siyaad barre ma dhiman waa hore hadiiba uu dhib jiray sidaad sheegateen?
Markaad aragto odoyaal godkii talaabo u jira ama ka yarba, oo ku doodaya cadawgeenii baa halka soo fadhiya, cadawgeena meel aan ugasoo wadajeesno, cadawgeenu wuu nagu farxayaa, cadawgeenu qaranimo uma ogola beesheena, dhaqaqankaas iyo dhaqaale wada socda oo dadka lagu kala fogeeynayo yuhuudaa iska leh wax soomasli shaqo ku leedahay ma'ahan.
Yaa cadaw u ah waqooyiga bal is waydii inta keligaa meel qabaw fariisatay? hadaad qayishana dhawr laamood soo qaado ha iska badin si aadan isugu dhex yaacin
Awoowe dadka waan kala aqaan intii igu fillan, shacabka soomaalida waxaa ugu qalbi fiican uguna daacadsan reer jabuuti darajada labaadna waxaa gelin lahaa waqooyiga.
Tan sedexaad inteena kale aan isku qabsano
Hadii aqoonsigii la waayay mashruuca jacayl iyo midnimo maad ku bedashaan intaad abuur cusub talaviv u dooni lahaydeen.
Haaheey, Waa arkaa in aad wali ku dhago-banjarsan tahay dhii-dhiidii iyo isku-dhexyaacii Radio-ka "Faqash-ka-hadheenku" ay nafta ku sasabi jireen mar haddey, Ilma-Gumeednimo ay ugu darsantay jabkii kasoo gaadhay burburkii booli-qaran. Maantana ay halka ay joogaan ee "maganta" ay Xamar ku yihiin ay wada muuqato.
Sidaas-daraateed, haddaad ku nafiseyso afka oo aad ku ciil-baxdo, waxba hala hadhin. Laakiin kuu dhameeyey, oo waxaan ku idhi nin African gumeystaa "heerkiisu waa heeryo iyo hanjab, hoog-aduunna waa u hagoog". Markaas, Saaxiib, halkan ku nafis.